I-china Intengo enhle china abakhiqizi abasha be-ginger abasha abakhiqizi nabaphakeli | AGR
Inani lokudla okunempilo:
i-ginger entsha ine-detoxifying effect inzalo, i-ginger ku-ginger emzimbeni, lokhu kungakhiqiza i-enzyme ye-antioxidant, inamandla amakhulu okubhekana nama-oxygen radicals, kepha futhi isebenza kangcono kune-vitamin E.
Ujinja ungashukumisa i-mucosa yesisu, ubangele isikhungo se-vasomotor kanye nozwela lwe-nerve reflex evusa inkanuko, ukukhuthaza ukujikeleza kwegazi, ukukhulisa ukusebenza kwesisu, ubuhlungu besisu, ukujuluka, umphumela we-antipyretic. I-Jiang iphinde ithuthukise uketshezi lwejusi yesisu kanye ne-peristalsis yamathumbu, okusiza ukugaya; i-ginger zingiberene, i-zingerone kunendima ecacile ekumiseni ukuhlanza.
Ujinja uvimbele kakhulu isikhumba semikhunta futhi ubulale umphumela we-Trichomonas vaginalis, welaphe izilonda ezahlukahlukene ezivuvukile ze-carbuncle.
Ujinja uvimbela umdlavuza ukusebenza kwamaseli, unciphise imiphumela enobuthi yomdlavuza, ungadlala umphumela wokulwa nomdlavuza.
Ujinja unokukhululeka ukujuluka, ukufudumeza ukukhwehlela kwamaphaphu, ukukhipha ubuthi emzimbeni, ukwelapha amakhaza angaphandle, isisu esibandayo, ukuhlanza, ukukhwehlela okubandayo, ubuhlungu besisu, isifo sohudo, nezinye izifo kubuthi be-crab
Okwezinhlayiya zokulahleka kwezinwele ezihlotshaniswa ngezinhlobonhlobo zezinhlobonhlobo zikajinja
UGinger isitshalo esinezimbali futhi igama laso elisemthethweni yiZingiber officinale. I-rhizome, eyaziwa kakhulu ngokuthi impande, yilokho okungenzeka ujwayelene nakho. Impande iyababa futhi ine-peppery ngokunambitheka, inezinto eziningi zokwelapha. Isetshenziswa emhlabeni wonke kuzinhlelo zokusebenza zokupheka nezemitholampilo-zombili ngesizathu esihle
Ujinja umuthi ongapheli otshalwa kakhulu enkabeni, eningizimu-mpumalanga kuya eningizimu-ntshonalanga yeChina, kanti futhi uvame ukutshalwa e-Asia eshisayo. I-rhizome isetshenziselwa izinhloso zokwelapha, futhi imikhiqizo emisha noma eyomisiwe ingasetshenziswa njengezithako zokupheka noma yenziwe ngo-pickle no-ginger ushukela. Amafutha wephunga angakhishwa ezihlokweni, emaqabeni, nakuma-rhizomes, futhi asetshenziswe ekudleni, eziphuzweni nakumakha ezimonyo.
Ijinja entsha ingakhiqiza ukunambitheka okuhle futhi ibe nomphumela omuhle wokunciphisa amabhaktheriya, igcine inhliziyo isesimweni esihle futhi ivikelekile.
Langaphambilini Intengo eshibhile ngobuningi fresh organic garlic mesh bag price of garlic
Olandelayo: ikhwalithi ephezulu intengo engcono kakhulu i-ginger esiphundu esisha esiphundu
izinga okusezingeni intengo engcono Shandong fresh yo okubabayo ...
Khipha ku-internet Intengo Export Chinese New Nqampuna Fresh Purple ...
ukuthekelisa wholesale imifino ginger kanye ga ...